Fifandimbiasam-panentanana Twitter vaovao hifantoka amin’ny fomba fijerin’ny mpikatroky ny teny avy any Azia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2019 10:46 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , हिन्दी, ਪੰਜਾਬੀ, Português, English
Siokam-borona avy amin'i Id-iom ary nampiasaina araka ny lisansa Creative Commons CC BY-NC 2.0.
Manomboka anio talata 6 aogositra, hifandimby araka ny lisitra ireo mpikatroka ara-piteny manerana an'i Azia ho vahinin'ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline. Arindran'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation ary ny O Foundation izao fanentanana media sosialy izao izay maka toerana ao anatin'ny taona iraisampirenena ho an'ny fiteny indizeny 2019 ary hanome sehatra ireo feo maro isan-karazany ao amin'ny faritra hizara ny tantaran'ireo zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray ny fiteny sy ny fomba andraisan'ny aterineto anjara amin'izany.
Mifanahatahaka amin'ny fampiasana ny Twitter ho fitaovam-pampitan-kevitra mandeha amin'izao fotoana izao any Amerika Latina (@ActLenguas) sy aty Afrika (@DigiAfricanLang), any Canada sy Etazonia (@NativeLangsTech), ity tetikasa ity fa hifantoka kosa amin'ireo fiteny manerana an'i Azia.
Tena tsara dia tsara ny valin'antso ho fandraisana anjara amin'izany, satria efa feno sahady ny lisitra ao anatin'ny herinandro maromaro. Manalava tanana ihany koa izahay manasa ny hafa handray anjara. Raha manana tolokevitra amin'ny olona tsara atao ho vahiny amin'izany fifandimbiasana izany ianao dia miangavy anao hifandray aminay.
Subhashish Panigrahi (fiteny Odia)
Sanjib Chaudhary (fiteny Tharu atsinanana)
Pasang Yangjee Sherpa (fiteny Sherpa)
Janak Raj Bhatta (fiteny Doteli)
Ramjit Tudu (fiteny Santali)
Mangu Purty (fiteny Ho)
Benson KC Fang (fiteny Taivoan)
Mulihay Talus (fiteny Sakizaya)
Luh Ayu Manik Mas (fiteny Baliney)
Abhinash Das (fiteny Assam)
Santionan'ny olona ao anivon'izao fanentanana izao fotsiny ireo hizara ny tantaran'ny asa mifandraika amin'ny fiteny mitranga amin'izao fotoana izao manerana an'i Azia. Tsidiho ny pejy fanentanana ijerena ny fandaharam-potoana mandeha amin'izao fotoana izao ary aza miala hijery ireo lahatsoratra bilaogy fanontaniana sy valiny ahitanao ny horirantavan'ireo nasaina tsirairay avy.
Izao tetikasa media sosialy izao dia niainga avy amin'ny fisantarana andraikitra hafa toy ny @IndigenousX any Aostralia, izay nanoloran'ny mpanorina azy antsoina hoe Luke Pearson fitarihan-dalana amin'ny fandaminan-draharaha. Ny kaonty Instagram an'ny Global Voices ihany koa dia tantanin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina efa ao anaty lisitra ary fomba tsara dia tsara izany nahitana ny zavamisy iainan'ireo mpikambana maro sy ny toerana onenan'izy ireo avy.
Afa-manohana izao fanentanana izao ianao amin'ny fanjohiana ny kaonty @AsiaLangsOnline mandritra ny taona 2019, sy amin'ny fampitana ireo sioka hitanao fa mampisy aingam-panahy mahaliana. Mazoto hahita ny domberina ihany koa ireo vahiny ary hiezaka araka izay azony atao hamaliana anao.